ဟိုးတုန်းက ဒုက္ခ.. အခုတော့ဟာသ | Layma's World
Posted on March 1, 2009 by layma
ကြွေးရှင် ကြောင်မျိုးက စီပုံးမှာ တညောင်ညောင် အော်လှပြီ… ။ ကြာရင်ကြောင်ကိုက်ခံရတော့မယ်…။ တော်ကြာ စ်ိတ်ဆိုးပြီး နောက်မရေးခိုင်းတော့ရင် ဒုက္ခ…။ အဲဒီခေါင်းစဉ်အတွက် ရေးစရာ အကြောင်းက Feeling 28 မှာ ရေးပြီးသားဖြစ်နေတယ်…။ အကြောင်းအရာအသစ် ရှာမရဘူး ဖြစ်နေတယ်…။ ဒုက္ခ မကြုံဖူးလို့မဟုတ်ပါဘူး…။ ကြုံဖူးတဲ့ ဒုက္ခက ဟာသမဖြစ်တဲ့ ဒုက္ခတွေ ဖြစ်နေတယ်..။ ပြန်တွေးမိတဲ့ အချိန်တိုင်း နာကျင်နေရတဲ့ ဒုက္ခမျိုးပဲ ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်…။ ဒါကြောင့် အဟောင်းလေးကို ( ဆားချက်တယ်ပဲ ဆိုဆို… ) ပြန်ကူးပေးလိုက်ပါတယ်…။
မိတ်ကပ်မာမီကတော့ ချွေးပြန်နေတဲ့ မျက်နှာကို မိတ်ကပ်လိုက်ဖို့ရင်း သမီးလေး.. စိတ်လျှော့ထား… ဘာမှ မဖြစ်ဘူး..အေးအေးဆေးဆေးပဲ… လှလှလေးပြုံးနေ လို့ပြောပါတယ်…။
အဲဒီတုန်းက ကျပ်ထုပ်နေတဲ့ သတို့ သမီး ၀တ်စုံအောက်မှာ အသက်ရှူလိုက်ရင် ချုပ်ရိုးတွေ ပြုတ်ထွက်ကုန်မလားလို့တွေးပူပြီး အသက်တောင် ရဲရဲ မရှူရဲခဲ့တဲ့ ဒုက္ခ…၊ ပင်အပ်စူးလို့လမ်းလျှောက်ရခက်တဲ့ ဒုက္ခ..၊ အခါတော်… ဆိုတဲ့ သီချင်းသံကြားတော့ ငိုချင်သလိုလို… ဗိုက်နာသလိုလို…ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခ၊ ပြုံးလိုက်တိုင်း တဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ခက်ခက်ခဲခဲ ထိန်းချုပ်ခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခ… အဲဒီဒုက္ခတွေက အခုကျတော့ ဟာသ … လွမ်းရတဲ့ဟာသ …။ ။
မှတ်ချက်။ ။ မင်္ဂလာဆောင်တာများ. အဲသလောက်တောင် စိတ်လှုပ်ရှားရသလားလို့လာမပြောနဲ့ …။ အဖြေရှိပြီးသား… သမီးမှ မဆောင်ဘူးတာ……….လို့ ….။ 😛
Filed under: Personal, Tag |
« ခြံထဲက.. ( ဆုံး) Vivian ကို ကြည့်ပါ … »
အောင်သာငယ်, on March 1, 2009 at 1:31 pm said:
တကယ့်အဖြစ်အပျက်ဆို ဟာသ မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်…
သားကြွက်, on March 1, 2009 at 2:02 pm said:
ဖတ်ဖူးပြီးသားကြီး အပေါ်က နိဒါန်း နဲ့ အောက်က နိဂုံးကတော့ အသစ်ပေါ့ ။
သာမီး က မင်္ဂလာမဆောင်ဖူးဘူးလား ဘဘ ကတော့ ခဏခဏကို ဆောင်ဖူးပါ့ သက်မွန်မြင့် နဲ့ ဆောင်လိုက် မယ်လိုဒီနဲ့ ဆောင်လိုက် အိပ်မက်ထဲမှာ ဟီးဟီး ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကြောင်မကိုက်တော့ပါဘူးး မင်္ဂလာဆောင်ရင် စိတ်လှုပ်ရှားတယ်လား တစ်ခါလောက်တော့ တကယ်ဆောင်ကြည့်အုံးမှ တွေးကြည့်တာ နဲ့ တင်ရှက်စရာကြီး 😛
ကြွက်မီ, on March 1, 2009 at 7:31 pm said:
. . .း-)
တော်တော်စိတ်ရှုပ်နေမှာ မြင်ယောင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပျော်လည်းပျော်တယ်ဟုတ်. . .
ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေက တခြားအကြောင်းဆို မှတ်မိချင်မှ မှတ်မိနေမှာ . . .
ဒေါင်းမင်း, on March 1, 2009 at 7:33 pm said:
နေ့အိပ်မက်, on March 1, 2009 at 11:15 pm said:
အမှတ်တရပေါ့.. အမြဲတမ်းမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့အကြောင်းပြောရင် သတိတရရှိတာပေါ့.. ပျော်စရာကြီးနော် မမ
ponyate, on March 2, 2009 at 7:52 am said:
ဖတ်ဖူးပါတယ် မှတ်နေတာ သတို့သမီးရယ်။ ဆားချက်တာကိုး :D။ အမြဲတမ်း အမှတ်တရလေး ဖြစ်သွားတာပေါ့။
THS, on March 2, 2009 at 4:48 pm said:
ဟီ ဟီ ဖတ်ဖူးတယ် ၊ တကယ်ပဲများရမယ့် နေ့ကျမှ ဖြစ်ရလေ 🙂
nu-san, on March 2, 2009 at 5:45 pm said:
ဒီပို့စ်ဖတ်ဖူးတယ်.. 😀 မင်္ဂလာဆောင် ၀တ်စုံနဲ့ အနေခက်နေတဲ့ လေးမကို နောက်တစ်ခါ မြင်အောင် ကြည့်သွားတယ် ညီမလေးရေ… အမတုန်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆိုတော့ ဧည့်သည်တွေ ဧည့်ခံနေရတာနဲ့ နေ့လည်စာ ထမင်းကို ဟုတ်တိပတ်တိ မစားလိုက်ရတာ မှတ်မိသေးတော့တယ်.. 🙂
မိ, on March 2, 2009 at 7:18 pm said:
အော် လေးမ လေးမ နင့်အထုတ်ကို နင်ဖွင့်ချလိုက်ပီပေါ့ ခစ်ခစ် လုပ်ပီ ငါတော့ အိတ်တုန်းက အဖြစ် မှတ်မိတုန်း နင့်ရဲ့ မျက်နှာကြီးလည်း မြင်ယောင်တုန်း ဟီး လေးမလေ တခြားသူမှ မဟုတ်တာ ဟီး ဒါပေမယ့် နင်အရမ်းလှတာ ဘယ်သူမှ မညင်းနိုင်ပါဘူးဟ ဟီး ချုပ်ရိုးပြုတ်ပေမယ့် လှဆဲပါ ဟီး
SoeMoe, on March 3, 2009 at 9:06 am said:
MhawSayar, on March 4, 2009 at 7:20 pm said:
တစ်ကယ်ပါပဲ.။ မင်္ဂလာမှ မဆောင်ဘူးတာကိုး နော. 😀
အရင်တစ်ခေါက် ဖတ်တော့ တစ်မျိုး၊ အခုတစ်ခါ ဖတ်တော့ တစ်ဖုံ. ရသစုံတယ်ဗျာ။
လွမ်းလုင်, on March 5, 2009 at 1:44 am said:
ဖြစ်ရမယ် ငါတို့အစ်မကတော့… ဒါပေမယ့် အခုတော့ လွမ်းမောပျော်ရွှင်စရာတွေပဲ မဟုတ်လား…။ 😀
ကဒေါင်းညင်သာ, on March 12, 2009 at 8:00 am said:
မင်လာတောင် ဆောင်ပြီးတွားဘီ.. ဂိန်..:P